Cooker hoods nge uxhumano ukupholisa ngaphandle ukudlala ekhishini hhayi kuphela indima O umusi namaphunga ako for Environmental Security. Futhi kuvimbele ukulimala evele. ukuhwamuka abahlukahlukene, imikhiqizo kaphethiloli omlilo namabhalansi amafutha emoyeni kancane kancane aqoqana ezindongeni, countertops, ophahleni kanye phansi. Ngenxa leli thonya, baqala ukuncipha abantu abakhuluma, ukuwohloka by amafutha nezinye imali. Ukusebenzisa lezi izinqubo isizinda kungenziwa balulaza, okuzokwenza ugcine izimali zakho futhi uyowandisa impilo ekhishini izitsha.
Izinhlobo ukugeleza hoods
Amamodeli kanye ukuhluka kubhekwe amadivayisi kuhluke ngobukhulu, ngendlela kanye intengo, isimiso wokusebenza. Cooker hoods nge uxhumano ukupholisa zisetshenziselwa ukukhulisa ukususwa emoyeni kusukela isikhala ngaphezu kwamanzi umsebenzi ekhishini futhi ukungaqaliswa okwalandela ngokusebenzisa imbobo ukuzwakalisa.
amayunithi Okhaviwe zihlukaniswe izinhlobo ezimbili:
imodeli Passive. alinikezelwanga obandayo i motor ngogesi e isakhiwo. Yonke inqubo ukusebenza kungenxa uhlelo saliphosa ukupholisa imbobo.
Active cooker hoods yokuxhuma umsebenzi ukupholisa ngenxa uxhumano ezengeziwe izinjini okuyinto ezibekwe ngaphakathi Dome. Motor inikeza Ukuhamba enamandla, umule okuthakazelisayo, ukungcola, amafutha amaconsi.
Noma yimuphi uhlobo egeleza qeda design igibele ngokuqondile ngenhla hob. Nge ukupholisa iyunithi imithombo zixhunywe vozuhovodami ekhethekile. Lokhu kungaba ibhokisi ngothayela noma metal lukathayela. Ukuvimbela umsindo okungafunwa, emoyeni ezinqoleni ifakwe soundproofing impahla. ukubukeka Tebuciko, ngeke konakalisa uma idivayisi imaski for ophahleni imisiwe.
On entanyeni amadivayisi main Amapayipi awashintsheki abanezinto zokugawula ezibukhali. Ngaphandle izici kubhekwe, ezikhishwe zihlanganisa izingxenye ingxenye:
prefilter. Inikeza ukuvikelwa idivayisi kusukela izingqimba fat futhi umusi.
isihlungi lesidze. Kusetshenziswe ukususa iphunga. Ngokuvamile inezigaba carbon.
esikhundleni esifike ngesikhathi futhi yokuhlanza izihlungi ngeke kuphela ngcono isizinda, kodwa futhi bandise nokuphila iyunithi.
Isizinda ngaphandle imbobo
idivayisi onjalo recirculation futhi ayidingi uxhumano amavesi ukupholisa. Air ukusivumela ngesikhathi usizo kusibasela filtration iyunithi, okuyinto kususwa amaphunga, intuthu, umswakama ngokweqile kanye amafutha. Ukuphumelela idivayisi kuncike umthamo kanye filtration uhlelo. Cooker hoods ngaphandle ukuxhuma ukupholisa ifakwe ezimbili eziyinhloko isihlungi iyunithi.
Uhlelo lokuqala isetshenziswa ukuqeda amanoni isikhala ihlanganise emoyeni, futhi inikeza yokuhlanza anolaka. Lezi zici zenziwa aluminium noma acrylic. Inketho yokuqala esiphumelela nakakhulu lapho ukhonza eside futhi kulula ukuhlanza.
Uhlelo olulandelayo nobunzima iphunga ezingemnandi, umswakama ngokweqile, amandla omlilo izinsalela. I element eyinhloko isihlungi carbon. Kudinga esikhundleni njalo (cishe kanye ikota).
Izinhlobo ekhishini hoods ngaphandle ukuxhumana ukupholisa
Wonke amadivayisi kubhekwe ukusebenza isimiso esifanayo, kodwa kuhluke uhlobo ukufakwa, okuyilezi:
samuntu Classic njengoba isambulela flat. umklamo ukuhluzwa Special akudingeki. Umise ngokwaso njengoba hood kuhle emakhishini ezincane.
Pendant. It efakwe phezu cooker, ukukhululwa ukugeleza womoya kusukela ngaphambili, elenza kukwazeke ulikhweze phezu ikhabethe.
Esakhelwe ngaphakathi inguqulo. It ikuvumela ukufihla idivayisi ngaphakathi ifenisha. I-apharathasi kuyinto icwecwe futhi yamandla aphezulu ukusebenza.
Cooker hoods ngaphandle yokuxhuma ukupholisa ngamathuluzi telescopic. Lezi ukuhlukahluka tingentiwa eduze kwamanzi umsebenzi uma kudingeka.
amayunithi kubhekwa ukwenza imisebenzi ehlukahlukene ukusebenza, kuye ngokuthi lapho izofakwa (phakathi, ekhoneni noma inqubo ehlukile).
Emihle nemibi ezikhishwe ngaphandle air Amapayipi
Ikhishi kanye nanoma yimiphi eminye zikagesi babe pluses yabo kanye minuses. Exhaust kudivayisi ngaphandle yokuxhuma ohlelweni ukupholisa has eziningi eziwusizo:
ukufakwa Elementary ngaphandle kokusebenzisa nokufakwa eyengeziwe kanye hoses yokuxhuma. Faka idivayisi ngokwayo akunzima.
Umnotho. Njengoba sazi ukuthi ngisho hoods cooker (60) kanye uxhumano emoyeni kusetshenziswa inqubo amandla amaningi, lokhu ukuguqulwa kwaba engabizi ngempela.
Izindleko isakhiwo esicutshungulwayo ingaphansi kwe uhlelo obufanayo emoyeni.
Yini embi ngalo amayunithi sinjalo isidingo esikhundleni njalo izici zokuhlunga. Kuyodingeka senze okufanayo kakodwa ikota. Cooker hoods ngaphandle kokuba exhunywe kwi-ukupholisa, amanani awo ukuqala ruble 5000, iyoba umsizi okuthembekile ekhishini lakho.
Indlela ukuxhuma hood ngaphandle emoyeni?
Amadivayisi ezisebenza mode recirculation, kulula ukufaka kuka cooker hoods nge uxhumano ukupholisa. Lokhu kungenxa yokuthi ifuna ukusebenzisana kushaft ukupholisa cha. Kulezi amadivayisi into esemqoka - ukushintsha izakhi isihlungi njalo.
Okokuqala udinga ukuthi ukhathazeke ngokuthi eduze indawo ye ukufakwa isizinda kwadingeka amandla. Ngaphambi ukufakwa iyunithi okumele asetshenziswe amaphuzu yomdwebo okunamathiselwe, izimbobo sokuprakthiza, ngezikulufo isethi noma dowels okwalandela kudivayisi nenkanuko edlulele. A igxathu eliya phambili kuyoba obandayo hood odongeni, ixhume eziko likagesi futhi yokuqinisekisa test.
Ukufakwa iyunithi nge emoyeni
Ngokwengxenye enkulu, ekhishini hood uxhumano ukupholisa ngeke izinkinga. Into esemqoka ukuthi konke ukuxhumana kuqinile futhi ngokuphephile abethela. Ukwenza umsebenzi, kudingeka ucabangele izincomo ezilandelayo:
Uxhumano akumelwe kutsetselelwe imbobo umoya omncane, ngakho ukuthi uma iyunithi is off eyenziwa zemvelo emoyeni okusalungiswa.
Ukusebenza okuvamile unit sizonikeza Ukuhamba ngaphandle kokuphazanyiswa ezengeziwe.
Ubude imbobo kanye nenani crimps kumele zincishiswe.
Ukukhetha phakathi lukathayela kanye bushelelezi kwamanzi tube, kufanele kubhekwe ukuthi samuntu sokuqala kahle bent, kodwa retards ukugeleza ukunyakaza.
I phatha eguqa kufanele abe inguquko bushelelezi.
Engeziwe komoya emva angabiki noma njalo okuphakelayo Street ukwenza hood kahle.
Okunqatshelwe ukukhweza idivayisi nge ukufinyelela kukholamu flue igesi.
Indlela kanjani ukuxhuma hood kuya ukupholisa ngokuzimela, inikeza akukho nobunzima letitsite, uma nje umehluko wemisindo nemiqondo yamagama athile futhi butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi kwezobuchwepheshe.
Ngemva kokuhlola izici kudivayisi, yokusebenza isimiso, ukusebenza kanye ukufakwa ezicashile kungenziwa baphetha ngokuthi akhiphe kumelwe nakanjani babe khona ekhishini. Ukukhethwa ukuguqulwa incike ubukhulu egumbini, ukushuba inqubo yokusebenza, kanye nekhono zezimali ukuba ngumnikazi izintandokazi.
Ixhuma hoods ukupholisa, isimiso ogxile ukuncela emoyeni ekusakazeni nge zokuthutha okulandelayo lapho imiphini ukupholisa, kunzima futhi kudinga izibalo ezithile. Ngokwesibonelo, ngokweqile Amapayipi eside uyobheka unaesthetic nokwehlisa kahle zedivayisi ngokwayo. Ngaphansi izikhathi ezithile ukufakwa umsebenzi silula futhi sicacile.
Inguqulo ngaphandle komoya ukufakwa lula kakhulu, futhi intengo ngezansi. Nokho, nazi izici. Kudinga esikhundleni njalo izakhi lemifanekiso, kungenjalo qeda kahle uzokwehla kakhulu. Kudivayisi ngaphandle kwaphazamiseka ukupholisa has izinhlobo eziningana okunamathiselwe elikuvumela ukuwathola for imuphi usayizi futhi isikhala elingaphakathi.